MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): ဟိုဟို ဒီဒီ ...
ဟိုဟို ဒီဒီ ...
Posted by MgHla at 5:01 pm
မနေ့က ဘောလုပ်ပွဲ ဟုတ်ပါဘူး... မှားသွားလို့ ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်သည်... ကွင်းထဲဝင်တော့မယ် ဆိုမှ လက်မှတ် ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး ဆိုလို့ ပျော်လိုက်တာ... တကယ်တန်းကလည်း လက်မှတ် အလကားရလို့ သွားကြည့်တာပါ... လူက ၆-ယောက်၊ vip က ၂-စောင်၊ အထူးတန်းက ၁-စောင်၊ ရိုးရိုးတန်းက ၂-စောင် ကိုးလို့ ကန့်လန့် ဖြစ်နေတုန်း အလကား ကြည့်ခွင့်ပေးတော့ အထူးတန်းမှ အကုန် တက်ကြည့်ကြသည်... ကိုသခင်ကြီးကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီး ရိုက်သည်... ကျတော်ကတော့ ဇာနည် အီလက်ထရောနစ် ကလုပ်ထားတဲ့ LED မီးလုံးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ TV ကို ကြည့်လိုက် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက ကင်မရာမန်းကို ကြည့်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေကို ဖြစ်လို့....
ခုရက်ပိုင်း မအားပါ... www.htooeainthin.com ကို အင်္ကျီအသစ် ပြန်ဝတ်ပေးနေရလို့ပါ... အားပေးကြပါဦး... အကြံပေးကြပါဦး...
Labels: het, htooeainthin.com, မောင်လှရေ
Keep posting Mandalay news. Your blog has been linked on
Happy Birthday to My Bro Ko MM.Aye & Me (Mg HL.Aye...
Orange Super Market အသစ်ထပ်ဖွင့်ပြီ... (Mandalay N...
ဆာဒူးကြီး မန္တလေး ရောက်လာခြင်း...
အနုပညာ ပြပွဲ ရှိတယ်...
... Mandalay & Pyin-Oo-Lwin (MayMyo) News ...
... Happy Birthday to Ko minO & Kalvin ...
... ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဟောကြားတဲ့ ထေရ၀ါဒ နိဒါန်း...